Madaxweyne Farmaajo oo maalmaha soo socda kusoo wajahan Puntland | SAHAN ONLINE
Madaxweyne Farmaajo oo maalmaha soo socda kusoo wajahan Puntland
MUQDISHO – Madaxweynaha Dawladda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu safar ku tago magaalada Garoowe ee caasimada Puntland.
Madaxweyne Farmaajo ayaa booqashadiisu qeyb ka tahay safaro uu ku kala bixinayo xarumaha maamul goboleedyada dalka.
Waft ballaaran uu hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha Gudaha,Fedetaalka iyo dib u heshisiinta Cabdi Faarax Juxaa ayaa safar ku maraya deegaanada Puntland ayaa sheegay in safarkiisu uu gogol xaar u yahay booqasho la filayo in Madaxweynaha uu maalmaha soo socda ku taco.
Cabdi Faarax Juxaa ayaa shalay gaaray magaalada Boosaaso halkaasoo si weyn loogu soo dhaweeyey ,wuxuuna horay usoo maray magaalooyinka Gaalacyo,Garoowe,Qardho io deegaanada kale ee Puntland ka tirsan.
Safarkeyga wuxuu horu dhac u yahay booqasho uu Madaxweynaha dowladda Federaalka Maxamed C/llaahi Farmaajo uu ku imaan doono deegaanada Puntland, haddii alle idmo, waxaan idinka codsanayaa inaad u diyaar garowdaan soo dhoweynta Madaxweynaha”ayuu yiri
Waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa ay safar dhulka ah ku mari doonaan deegaanada Puntland si ay ugu kuurgalaan xaalada nabadgelyo ee deegaanada ka jira.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa horay booqasho ugu tagay xarumaha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed,Galmudug iyo Jubbaland ,wuxuuna safarkiisii ugu dambeeyey ku tagay Kismaayo uu habeen ku heyday.